कोरोना संक्रमणले विदेशमा यो साता थप १६ जनाको निधन - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Breaking News कोरोना संक्रमणले विदेशमा यो साता थप १६ जनाको निधन
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैसिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विदेशमा यो साता थप १६ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता कतारमा ८ जना, कुवेतमा ३ जना, युएईमा ५ जनाको निधन भएको हो ।
कतारमा निधन भएका ८ जना मध्य २ जनाको निधन हुनुभन्दा पहिला कोरोना पुष्टि भएको र बाँकी ६ जनाको निधनपछि कोरोना पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. संजीव सापकोटाका अनुसार हिजो शनिवार साँझसम्म विदेशमा मात्र १४ देशमा १ सय ६० जना नेपालीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ ।
समितिका अनुसार मध्यपूर्वका केही देशमा रहेका नेपालीहरुमा भने अझै कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएको छैन् । विदेशमा ३० हजार ५ सय ७१ जना मध्ये २८ हजार ६ सय ८१ जना नेपाली संक्रमण मुक्त भएको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । संघ अन्तरर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सापकोटाका अनुसार भारत, साउदी, युएई र कुवेतमा मात्र ९ सय ५० जनामा नेपालीहरुमा यो साता कोरोना संक्रमणमा बृद्धि भएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस क्रिकेटर सन्दीप अस्पताल भर्ना
यस्तै मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशबाट यो अवधिमा १ सय ७२ वटा शव नेपाल ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ । विदेशमा विभिन्न कारण ज्यान गुमाएका ४ सय ३४ जनामध्ये १ सय ५६ जनाको परिवारको सहमतिमा गन्तव्य मुलुकमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । विदेशबाट अझै १ सय ७ वटा शव नेपाल ल्याउन बाँकी छ ।
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - November 27, 2020
काठमाडौँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ७०३ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय १०...
राजधानी समाचारदाता - May 24, 2020
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय लिने भएको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेपालको नक्सामा...
राजधानी समाचारदाता - July 21, 2020
भर्खरै राजधानी संवाददाता - October 29, 2020
बाँकेका ६९ जना कोरोना जितेर घर फिर्ता
राँझा । बाँकेका ६९ जना सङ्क्रमितले कोरोना भाइरसलाई पराजित गरी घर फर्किएका छन् । आज मात्रै बाँके नरैनापुरका थप २० जनाले कोरोनालाई जितेर घर...
Editor-Picks कौशिला कुँवर - October 7, 2020
प्रदेश ४ रासस - July 21, 2020
डा. निरजलाई गजल प्रतिभा पुरस्कार
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - September 1, 2020
पोखरा । यस वर्षको गजल प्रतिभा पुरस्कार डा. निरज भट्टराईलाई प्रदान गरिने भएको छ । गजल सन्ध्या, पोखराद्वारा गण्डकी प्रदेशका एक गजलकारलाई हरेक वर्ष...
Not-to-be-missed रमेश तिमलसिना - March 3, 2020
रौतहट । नेकपाका बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालले नेकपा भित्र देखिएको विवाद सामान्य भएको बताएका छन । रौतहटको गौरमा मंगलबार ऐतिहासिक कलाकुन्ज पुस्ताकालयको भवनको...
यो पनि पढ्नुहोस अछाममा बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, १७ यात्रु घाइते
यो पनि पढ्नुहोस सैन्य सहयोग र द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्न चीन प्रतिबद्ध